Wasaaradda Gargaarka XFS oo maanta deeq gaarsiisay Cisbitaalka dhimirka Xabeeb – Radio Muqdisho
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Xukumadda Federaalka Soomaaliya ahna kusimaha Wasiirka Xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa maanta deeq raashin oo ka kooban Bur, Bariis Sokor Saliid Timir Bustooyin iyo shandarooyinka laga xero kaneecada gaarsiiyay cisbitaalka dhimir Dr xabeeb ee Magaalada Muqdisho,
Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Dr Xabeeb ayaa ka mahadceliyay deeqdaan waxaana uu sheegay in ay bilaw utahay gargaarka ay u baahnaayeen dadka dhimir la’a ee ku jira Cisbitaalka ,waxaana uu intaa ku daray in Wasaaradda gargaarka ay uga soo jawaabtay si dhaqso .
“ Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka XF Soomaaliya waxa ay baaqeyna uga soo jawaabtay 48 sacaadod gudahooda waxaana uga mahadcelineynaa agabyada kale duwan ee inoo keentay hase yeeshee wali waa u baahanhay gargaarka dadka Soomaaliyeed meel wabo oo ay joogaan” sidaas waxaa yiri Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Dr Xabeeb.
Wasiir Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa sheegay in Wasaaradu ay u taagantahay in la garab istaago dadka baahiyaha gaarka qabo islamarkaana ay ka warqabi doonaan bukaanada ku jira Cisbitaalka qeybtaan ay tahay biloow.
“Dowladda iyo xukumaddiba waxaa ay u taaganyihiin inay ka jawaabaan baahiyaha bulshada, qeybtaan maanta ay keenay waa bilaaw ,waana ka warqabi doonaa xaalada dadka dhimirka la’a ee ku jira Cisbitaalada Dr xabeeb, waana u mahadcelineynaa sida uu bulshada Soomaaliyeed ugu adeegay” ayuu yir wasiir ku xigeenka Wasaaradda gar garaka Cabdirashiid Maxamuud Xasan.
Labo maalin ayaa laga joogaa markii uu baaq ku aadan in laga jawaabo baahiyaha heysta dadka dhimirka la’ ee ku nool magaalada Muqdisho ka dib munaasabad lagu xusayay maalinta Caalamiga ee Xanuunka dhimirka oo lagu qabtay Magaalada Muqisho taasi oo ku beegneyd 12 octobar ee bishaan.
Ra’iisulWasaare ku-xigeenka dalka oo furay shirka wadatashiga dhammeystirka Siyaasaddaqaran ee deegaanka